Kulmiye Wuu Gudbey, Weli Se Ma Guulaysan! | Somaliland Post
Home Maqaallo Kulmiye Wuu Gudbey, Weli Se Ma Guulaysan!
Kulmiye Wuu Gudbey, Weli Se Ma Guulaysan!
Noloshaa wada imtixaan ah. Haddii aad mid ka gudubto, mid kalaa albaabka kugu garaacaya oo ku hor yuuban.
In Xisbiga Kulmiye ka gudbey imtixaan horyaalley ayaa u cad sidii cir aan caad lahayn. Imtixaan kalaa se horyaalla. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) na in uu dhitadii iyo dhaxalkii sooyaal ee magaciisa meel u dayey oo hagoog u sameeyay ayaan ka marag kacayaa, inuu se hadh-dho san u yeelo hal meeris baa uga dhiman.
In Kulmiye imtixaan ka gudbey iyo in Axmed siilaanyo tis oodeed oo culus kor u qaaday oo meel ku tiirshey, waxa labada ba, hoosta ka xarriiqay oo far waaweyn ku qoray qabsoomiddii shirweynihii xisbiga Kulmiye golihiisa dhexe yeeshay 10/11/2015 iyo natiijooyinkii ka soo baxay.
Dad badani waxa ay ka yamxeerinayeen oo quuddarraynayeen in shirka Xisbiga Kulmiye ku keeni doono burbur iyo kala yaac u dhigma khilaafkii UDUB shan sannadood ka hor saaxadda siyaasadda ka saaray ee burburiyey.
Alle yamxeerintaas run kama uu yeelin oo golihii dhexe wuu shiray. Intii ugu badnayd xubnihii golaha dhexe (ka badan 90%) ayaa shirka soo xaadirtay. Waxa si aqlabiyad ah loo ansaxiyey murrashaxa jagada madaxweynennimo ee Xisbiga Kulmiye ee doorashada 2017, Muuse Biixi Cabdi, oo ay murrashaxnimadiisa sharciyeeyeen 344 xubnood oo ka mid ah 373 ergey ee shirweynuhu. Waxa kale oo cod aqlabiyad ah jagada murrashaxa madaxweyne ku xigeennimo ugu soo baxay madaxweyne ku xigeenka hadda Cabdiraxmaan Cabdillaahi (Saylici) oo jagadaas kaga adkaaday wasiirka caafimaad Dr Saleebaan Ciise (Xaglotoosiye).
Madaxweyne Axmed Siilaanyo, waxa uu ku suntamay madaxweynihii ugu horreeyey ee qaranka Somaliland oo isaga xilka haya, xaq na u leh in uu isa soo rashaxo mar labaad, sida dhayda caanaha u caddeeyey, in aannu mar kale jagadaas isu soo taagi doonin oo uu uga hadhay ragga ay siyaasadda ku wada jireen, taas oo Axmed Siilaanyo loogu sadburin karo marka la eego madaxda Afrikaanka ee xukunka aan ka degin illaa ay ku dul dhintaan oo qasriga maydkiisa laga soo jiido ama xoogga lagaga fara maroojiyo ee talada laga tuuro.
Labadaas dhacdo ee natiijadii shirka Kulmiye, waxa ay habka geeddi-socodka dimoqraaddiyadda curdinka ah ee Somaliland gelin karaan dardar cusub, waxanay shiidaal u noqon karaan in habkaasi sii dhiirrado, is na sii qorqoro oo gudihiisa ku sixi karo wixii khaladaad ah ee soo if baxay, wax na laga baran karo.
Labadaas dhacdo ee togan waxa dhinac yaalla laba cuyuban oo kale oo ku xisaabtan u baahan oo mid na Kulmiye u taallo xisbi ahaan, mid na Axmed Siilaanyo hoggaamiye ahaan:
Xisbiga Kulmiye iyo hoggaankiisa, gaar ahaan murrashaxiintiisa, waxa u yaalla hawl ballaadhan oo ku saabsan xisbiga dib u habaynta iyo dhiskiisa, midnimada iyo wada jirkiisa iyo u diyaar garowga doorashooyinka soo foolka leh oo noqon doono doorashooyin aan teello la isu dhigan, oo darka ceelka, sidii lo’ harraaddan, la isu garbin doono. Ta ugu muhiimsan ee hadda darayga ahi na waa xallinta wixii khilaafaad ah ee bilihii u dambeeyey xisbiga dhexdiisa ka oognaa ee ku saabsanaa qabashada shirweynaha iyo tartankii lagu kala calafka qaaday ee murraxashiixinta.
Axmed Siilaanyo, waxa horyaalla in uu xoojiyo xukuumaddiisa inta wakhtiga uga hadhay, si wanaagsan na u sii geeddi geliyo xil gudashada habsami u socodkeeda iyo ilaalinta kala dambaynta, degganaanta siyaasadeed iyo diyaarinta habraacyadii lagu qaban lahaa doorasho xor iyo xalaalinnimo ugu dhow, iyada oo taas xukuumaddu kala shaqaynaysa axsaabta siyaasadda, guddida doorashada iyo hay’adaha kale ee ay doorashadu khusayso.
Dhaxalka Axmed Siilaanyo iyo sooyaalkiisa, waxa guushiisu tiigsanaysaa doorashadaas 2017 iyo sida ay u dhacdo natiijo ahaan ee xukuumaddiisu uga soo soo dhalaasho, xilkana ugu wareejiso xukuumadda dhaxlaysa.
Somaliland waxa ay Soomaalida kale ku dhaantaa oo dheer tahay inta “dahabku maarta dheer yahay” oo waa aqoonta iyo dhaqanka xididdadiisu sii adkaanayaan ee sida khilaafaadka loo xallilo iyo habraacyada wax wada gorfaynta, is dhegaysiga, wada hadalka, wada tashiga, talo wadaagga iyo isu tanaasulka, kuwaas oo laga la soo dalandalay geedka hoostiisa, kana ciidamiyey oo shaqeeyey xilligii halgankii hubaysnaa ee SNM. Waa isrrada ay Somaliland ku taagan tahay ee lagu soo caano maalay, kuwaas u baahan in maanta na aan loo daymo la’aan, oo loo cuskado marjac laga soo dhimbiil qaato.
“Rooma (Rome) se maalin lagu ma dhisan” oo Somaliland weli wax badan baa u dhiman oo qabyo ah, inta se la hayaa na waa intii lagu beegsan lahaa intaas weli la tebayo maqnaanshahooda. “Midho gunti ku jira na kuwa geed dushii saaran loo ma daadiyo”.